Tips to constructastrong House | nepalconstructions
» how to constructastrong house ?
how to constructastrong house ?
बीमको रिङ राख्दा पिलरदेखि लम्बाइ १/३ भागसम्म ४ इञ्चको फरकमा र बीच भागमा ६ इञ्चको फरकमा राख्न सकिन्छ । बीमका डण्डी गाँसिएका ठाउँमा बीम छ भने रिङ ४ इञ्चको फरकमै राख्नुपर्छ । रिङको साइज कम्तीमा ८ मिलिमिटर हुनुपर्छ ।
बीम र पिलर जोडिने ठाउँ
बीमका सबै डण्डी अनिवार्य रूपमा पिलरको डण्डीभित्रबाट जानुपर्छ ।
बीम टुङ्गिने स्थानको पिलरमा बीमका डण्डी मोटाइको ६० गुणा लम्बाइबराबर पिलरमा मोड्नुपर्छ । मुनिका डण्डी पिलरका डण्डीसँगै मोटाइको ६० गुणा माथि र माथिल्लो डण्डी मोटाइको ६० गुणा पिलरको डण्डीसँगै तल मोड्नुपर्छ ।
बीम र पिलर जोडिएको ठाउँमा कम्तीमा दुईओटा रिङ हुनैपर्छ ।
बीमका डण्डी जोड्ने वा खप्ट्याउने तरीका
बीमको तल्लो डण्डी पिलर छेउबाट २ फीट छोडेर मात्र गाँस्नुपर्छ । तर, बीमको लम्बाइको बीचको एक चौथाइ भागमा डण्डी गा“स्नु हँुदैन ।
बीमको माथिल्लो डण्डी गाँस्दा बीमको लम्बाइको बीचको १ तिहाइ भागमा मात्र गाँस्नुपर्छ ।
डण्डीको गँसाइ यसको मोटाइको ६० गुणा राख्नुपर्छ । गँसाइको भागभरि रिङ प्रत्येक ४ इञ्चमा राख्नुपर्छ ।
रिङ कम्तीमा ८ मिलिमिटर मोटाइको हुनुपर्छ ।
बीमको चौघेराभित्र रहेको स्ल्याबको लम्बाइ चौडाइअनुसार त्यसको डण्डी फरक पर्छ ।
स्ल्याबको बाहिरी छेउमा ‘टप’ ३ फीट ३ इञ्च (एक मिटर)सम्म भएमा स्ल्याबको माथि बङ्ग्याउने डण्डीमा १ सेण्टिमिटरको थप डण्डी राख्नुपर्छ ।
स्ल्याबको बाहिरी कुनामा ८ मिलिमिटरको ६ इञ्चको फरकमा ‘टोरसिन बार’ राख्नुपर्छ ।
माथिल्ला डण्डी भएका ठाउँमा डण्डी अड्याउने डण्डीको हुर्ची राख्नुपर्छ ।
सिल र लिण्टल लेबल
गारोलाई पिलरसँग बाँधेर सुरक्षित बनाउन सिल र लिण्टल लेबलमा कङ्क्रिट ब्याण्ड राख्नुपर्छ ।
ब्याण्डको मोटाइ ३ इञ्च र चौडाइ गारोको चौडाइबराबर हुनुपर्छ ।
पिलर ढलान गर्दा नै दुईओटा डण्डी बनाएर पिलरको छेउमा फर्मासँग जोडिने गरी राख्नुपर्छ । फर्मा खोलेपछि डण्डीलाई बाहिर निकालेर सीधा पारी अपुग डण्डी थप गर्नुपर्छ । थप गरेपछि रिङ ६/६ फीटको फरकमा राखी ढलान गर्नुपर्छ ।
स्रोत: भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन
Building Construction law in Nepal Government has formulated and implemented new fundamental regulations for planning and construction of houses, the...
Home loan helps to fulfill your dreams of owningahouse or renovation appart purchase,or buying land or purchase of...
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सिइओलाई तलब तथा सुविधा...
Udayapur cement industry , the biggest cement industry under taken by Nepal Govt.has started the production in normal capacity, New ...